သင့် Facebook Page က အဝတ်မပါတဲ့လူတယောက်လို မြင်နေရလား၊ ဖြစ်နေလား? | Online Service Center Myanmar -->
သင့် Facebook Page က အဝတ်မပါတဲ့လူတယောက်လို မြင်နေရလား၊ ဖြစ်နေလား?
Facebook မှာ Page တခု ဖွင့်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီ Page က ကိုယ့်ဆိုင်၊ ကိုယ့်ရုံး၊ ကိုယ့်အလုပ်ရုံ၊ ကိုယ့်စက်ရုံ၊ နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ Page ဟာ ကိုယ့် Image တခုပါပဲ။
ကိုယ့် Page ရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ Page ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေက မပြည့်မစုံနဲ့ဆိုရင် အခြားသူတွေအမြင်မှာ မြင်တွေ့ရ၊ သိရတာ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ Business Page တွေကို လူမြင်ကောင်းအောင်၊ အချက်အလက်ပြည့်စုံအောင်၊ မြင်တာနဲ့ ဝင်ကြည့်တာနဲ့ လူအထင်ကြီးသွားစေအောင်လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ထားဖို့အတွက်က ကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်တတ်ရင် တပြားမှ ကုန်ကျခြင်းမရှိပဲ လုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က ဘာဆိုဘာမှမသိလို့ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ Online Service Center Myanmar ကနေ အဲ့ဒီ အဆင်မပြေမှုကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။
Page Settings Service
Facebook Page ကို အဆင့်မြင့်မြင့် Settings ချပေးခြင်း၊ Facebook မှာ လုပ်ငန်းသုံး၊ Personal သုံး Page တွေတော့ဖွင့်ထားပြီး Settings ကောင်းကောင်းမချတတ်သူများ၊ Page တစ်ခုမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ မပြည့်မစုံဖြစ်နေတာမျိုးတွေအတွက် စိတ်ညစ်နေရသူများအတွက် OSC-Myanmar မှ အကောင်းဆုံး Page Settings Service ကို ပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
Page တစ်ခုမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်မထားဘူး။ Settings ကောင်းကောင်းချမထားဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီ Page ဟာ အ၀တ်မပါတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်နေရသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Pag Settings Service => https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=810558792485290&id=594235617450943
Page မရှိပါက အသစ်ဖွင့်ပေးခြင်း( Page ဖွင့်ထားပြီးသားရှိပါက ရှိသည့် Page ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါတယ် )။
Page Settings တွေပြည့်စုံအောင်ထည့်။
Page အသုံးမပြုတတ်ရင် သုံးတတ်အောင်သင်ပေး။
အဲ့ဒီလိုအရာတွေ အကုန် ပါပြီးသား Page Settings Service fees က $50 ယူပါတယ်။
Page က ဖွင့်ရတာလွယ်တယ်၊ Free အနေနဲ့ အများကြီးဖွင့်လို့ရတယ်၊ Settings အပြည့်အစုံဖြည့်တာပဲ နည်းနည်းခက်တာ၊ ကိုယ့်ဘာသာ Page ဖွင့်ပြီး Settings ချတတ်ရင် တပြားမှ မကုန်ပါဘူး၊ ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုမှသာ Service အပ်နိုင်ပါတယ်။
Advertising Facebook Knowledge Service Sharing